Cabinet / fanicha / Door Knob
Cabinet / fanicha Kubata
Door Lock muWet Nzvimbo
na admin on 20-07-02
Nekuda kwemvura inoramba ichinaya, mweya wekunyorova unenge wakakwira kwazvo, uye kona yese yeimba inogona kunyorova kwazvo. Panguva ino, zvinokanganisa nguva yekushandiswa kwemusuwo kukiya. Nekuti mhando yevhavha yemahara ndiyo yakanaka kana kuti yakaipa, imwe yeiyo nhanho inguva yekuwedzwa kwemunyu. Nekuti t ...
Maitiro ekuchenesa uye kubvisa hutachiona panguva yedenda
Iro riwaya coronavirus denda rakanyanya.Naizvozvo, kungave kumba kana kunze, kupatsanura kupararira kwehutachiona, ichi ndicho chiyero chakakosha.Zvekuti, kuve nechokwadi chemba, hutsanana ndizvo zvakakosha pakusiyanisa kupararira kwehutachiona. .Nhasi, ini ndichakudzidzisa nzira yekuchenesa ...
Maitiro Ekuchengetedza Chero Door Lock
Door kukiya ndicho chinowanzoitika chinhu muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kana ukatenga kiyi pamba, haufanire kuichengeta kusvika yaputswa.Hupenyu hwevhisi yemusuwo ukiya inogona kuwedzerwa zvakanyanya nekuita chigadziro muzvinhu zvakawanda. 1.Lock muviri: Sezvo yepakati ...
Ificha Hardware Anobata, Brass Door Knobs, Midziyo Anobata Uye Mapfundo, Bronze Brass Door Knobs, Brass Lever Door Handles, Solid Brass Door Knobs,